Maalinta: Sebtember 21, 2018
Daboolka ciribta iyo gogol dhaafka isgoysyada qulqulka isku xirka u dhexeeya Karaman iyo Konya
Kongo-Karaman Xadidida Slope Sket-ka ee Wejiga Darbiga ah iyo Sharaxa Sharafta Tijaabada ah Iyada oo ah Natiijada Tender Republic of Turkey Railways TCDD 6. Agaasinka Adeegga Iibsiga iyo Xakamaynta Suuqa 2018 / 410626 KİK [More ...]
Jiilkayaga cusub ee wadida socodka qaran ee dhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ayaa soo saaray natiijo ka dhalata dadaalada wax soo saarka heer qaran iyo maxalliga ah iyadoo lala kaashanayo TCDD Taşımacılık AŞ, TÜLOMSAŞ iyo ASELSAN, 18-21 Sebtember 2018 taariikhi ah Berlin InnoTrans (Caalamiga ah) [More ...]
Danjiraha EU-da Berger wuxuu igu kalsoon yahay inuu yahay adeegga taraamulka ee Gaziantep
Midowga Yurub (EU) si loo wanaajiyo caafimaadka guud by Baarlamaanka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa, shaqo ay u saamayn iyo hagaajiyo meesha bannaan ee ku nool magaalooyinka ee gaadiidka magaalooyinka fuliyay Mobility Isbuuca Yurub, Madaxweynaha oo ka mid ah Midowga reer Degmooyinka ee Turkey [More ...]
Qiimaha Adeegga Ardayda ayaa lagu go'aamiyay Diyarbakir
Diyarbakır Isku xirka Gaadiidka Dawlada Hoose ee Magaalo Weyn (UKOME), sanad dugsiyeedka 2018-2019 si loogu dabaqo lacagta khidmada adeega ardayda ayaa la go'aamiyay. Maamulka magaalada ayaa ku dhawaaqay in macaamil ganacsi sharciyeed la sameyn doono hadii lacag lagu soo dallaco lacagta ka baxsan lacagta la bixinayo. Metropolitan [More ...]
Kooxaha bilayska taraafikada ee magaalada Istanbul waxay si dhaw ula socdaan baabuurta adeegga iskuulka. Kumanaan ka mid ah gawaarida adeegga 846 ayaa la baaray intii lagu guda jiray kormeerka ay ka bilaabeen gobolka oo dhan nabadgelyada iyo amniga ardayda. [More ...]
Safarka SAMULAŞ ee Baaskiiladaha ayaa bilaabmay
Nidaamka Tareenka ee Samsun Light (SAMULAŞ), oo ay kuxiran tahay Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun, ayaa soo saartay farriin ku saabsan rakaabka doonaya inay baaskiil ku raacaan taraamka. Bayaanka ay soo saartay SAMULAŞ; Waxaan rakaabkeena siinaa baaskiil maalmaha shaqada iyo saacadaha adeega. [More ...]
Mustafa Tuna "Waxaan sidoo kale samayn doonaa xarumo taraamo ah mashruuca Ulus Meydan"
Kaqayb galka baahinta tooska ah ee TRT News Ankara Duqa Magaalada Assoc. Dr. Mustafa Tuna, kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashruucyada suufiyada ee ka socda mashaariicda cusub ilaa ajandaha cusub ee xiriirka dhow la leh caasimadda ayaa laga soo saaray bayaan. madaxa [More ...]
Madaxweynaha Yilmarre ayaa faallo ka bixiyay mashruuca wadada Sapanca
Duqa Magaalada Sapanca Aydin Yilmazer, Kırkpınar wuxuu ku dhawaaqay inay sameyn doonaan gawaarida fiilooyinka. Dib u soo celinta mashruuca gawaarida fiilada. Marku hindisada hindise u yimid Kırkpınar oo qodista qodista ah, shirkadda waxay la kulantay falcelin muwaadin. Daaqa qaar ka mid ah mashruuca xargaha Kırkpınarlılar [More ...]
Gawaarida la dhisi doono ee Trabzon ma waxyeelo midba midka kale
Ka sokow baabuurka fiilada la qorsheeyay in laga dhiso Sümela iyo Uzungöl kadib Besikduzu, Sefik Turkmen, Duqa magaalada Akcaabat, oo sameeyay mashruuc kale oo wado-jidadka ah “Xargaha kaladuwan midba midka kale ma dhibaateeyo. Dalxiisayaashu meelo kala duwan ayey ku fadhiyaan baabuur kasta oo fiilo leh [More ...]
4 ayaa la tuuray baaskiilad ku taalla dalka Netherlands, 2 waxaa lagu dhaawacay
Tareen ku yaal magaalada Oss, Netherlands, ayaa ku dhacay gaari xamuul oo siday caruur. Bayaan ay soo saareen booliis, masiibada 4 waxay ku dishay ilmaha, cunug dhaawacmay iyo qof weyn oo ah 2 qof xaalado aad u xun [More ...]
Injiilka Tareenka Tareenka ee Nazilli
Xisbiga Cadaalada iyo Horumarinta (xisbiga AK) xigeenka Aydin Bekir Force Range, Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) Nazilli saraakiisha in Organized Industrial Zone (OSB) oo la qaban doonaa goobta mashruuca 'Container Tareen Line' [More ...]
Madaarka Bodrum Milkiilaha Waa maxay ugu dambeyntii?
Funda Ocak, Maareeyaha Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ), ayaa bixiyay macluumaad kusaabsan xaaladihi ugu dambeeyay inta lagu gudajiray howlaha dayactirka iyo howlaha dayactirka ee laga sameeyay Maddaarka Milas Bodrum bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka. Daraasadaha si isdaba joog ah ayey u socdaan [More ...]
Maalinta Magaalada City oo aan lahayn baabuurta Ankara
Waa barnaamij ay fulisay baarlamaanka Yurub tan iyo 2002, oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo caafimaadka guud iyo tayada nolosha Yurub, iyo sidoo kale saameyn ku yeelashada iyo hagaajinta dhaqdhaqaaqa iyo nolosha magaalada. 2018 [More ...]